ईर्ष्याको ऋण के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki वार्षिकी
1 वार्षिकी ऋण के हो?
2 दर वार्षिकी ऋण को लागि त्यहि छ
3 वार्षिकताको लागि सामान्य - ब्याज अंश घटाउने साथ भुक्तान वृद्धि
4 वार्षिकी ऋण - सबैभन्दा लोकप्रिय बंधक उधार
5 तय ब्याज अवधि अनुसार अनुगमन वित्त पोषण गर्नुहोस्
6 सम्बन्धित लिङ्कहरू:
वार्षिकी ऋण के हो?
एक वार्षिकी निरन्तर चुकौती दरको साथ ऋणको रूप हो। एक भुक्तानी ऋणको विपरीत, किस्त अवधिको अवधि अवधिमा एक नै रहेको छ यदि पूर्ण अवधिको लागि निश्चित अवधि अवधि तय गरिएको छ।
दर वार्षिकी ऋण को लागि त्यहि छ
यदि तपाईं आफ्नो सपना घर खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं उच्च लागत तिर्न र सामान्यतया धेरै वर्षमा वित्तपोषण रोज्नु पर्छ। वार्षिकी ऋणको सामान्य मार्ग बंधक ऋण मार्फत छ। यो निर्माण र भूमि लागत को 80% सम्म कवर गर्न सक्छ। जहाँ सामान्यतया बंधक ऋण को एक प्रकार अर्थात् नैतिकता ऋण लिइएको छ।
वार्षिकी यसको अर्थ "सम्पूर्ण अवधिमा दर समान नै रहेको छ", त्यसोभएको एक वर्षको ऋणको लाभ पहिले नै उल्लेख गरिएको छ - तपाईं वित्तपोषणको सुरुमा जान्नुहुन्छ, रकम को लागी मासिक सर्तको अन्तमा भुक्तान गरिने रकम। उधारकर्ता यस प्रकार अपरिचित शुल्क वा अतिरिक्त दावीहरूबाट सुरक्षित छ। बंधक ऋण सम्पत्ति मा बंधक संग सुरक्षित छ, जो भूमि दर्ता मा दर्ता गरिएको छ।
वार्षिकताको लागि सामान्य - ब्याज अंश घटाउने साथ भुक्तान वृद्धि
वार्षिकी ऋणको निरन्तर मासिक दर दुई घटक छन्: ब्याज दर र एक भुक्तान अनुपात। सुरुमा, ऋणको चुकौती अंश कम छ। यद्यपि, प्रत्येक भुक्तानीको साथ, बाँकी ऋण घट्छ, दरको ब्याज भाग घट्छ र छुटकारा भाग बढ्छ। तार्किक, उच्च उन्मूलन, सानो परिपक्वता। वार्षिकताको अन्त्यमा, ऋण बाँकी ऋण जारी रहनेछ। वार्षिकी ऋण ऋण को सबै भन्दा सामान्य रूप हो। किश्तहरूको भुक्तानी सामान्यतया मासिक हुन्छ, तर अन्य अवधिहरू सहमत हुन सक्दछ।
कम बंधक दरको साथ, सामान्य 1% भन्दा उच्च पुनरावृत्ति% ऋण छिटो बन्द गर्न को लागी उचित छ।
वार्षिकी ऋण - सबैभन्दा लोकप्रिय बंधक उधार
एक निश्चित स्तर कि किस्तिक दर भन्दा बढी, धेरै बंधक उधारदाताओं उधारकर्ता एक निश्चित ब्याज दर को लामो अवधि को लागि निर्धारित ब्याज दर - निर्धारित ब्याज दरों को पेशकश गर्दछ। उधारकर्ताको वित्तीय जोखिम परिणामको रूपमा कम से कम छ, किनभने किस्तरी राशि को सम्पूर्ण अवधि मा निरन्तर रह्छ। लामो अवधिको सम्झौताले दरहरूलाई सानो र माथिको निरन्तरता राख्न सक्दछ, ताकि बिल्डरलाई थप उच्च वित्तीय बोझको आशा गर्न सकिँदैन।
परिशोधनको रकम सामान्यतः उधारकर्ता द्वारा सुरुमा चयन गर्न सकिन्छ। तथापि, बैंकहरूलाई कम्तीमा 1% चुकौती आवश्यक पर्दछ। आजको अधिकांश बंधक उधार वार्षिकी ऋण संग वित्त पोषित छ। यो वित्तपोषण विधि राम्रो गणना गर्न सकिन्छ। विशेष गरी आत्म-कब्जा गरीएको आवासमा, भुक्तानी ऋणको यो फारम वित्तपोषणको क्लासिक विधि हो।
तल भिडियोमा, न्यूनियरिङ लोन विस्तारमा वर्णन गरिएको छ।
तय ब्याज अवधि अनुसार अनुगमन वित्त पोषण गर्नुहोस्
15 वर्षको निश्चित ब्याज अवधिको अन्त्यमा, एक अनुवर्ती वित्त पोषण गर्नु पर्छ, किनभने ऋण रकम पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको थिएन। वार्षिकी ऋण को मामला मा, ग्राहक को मासिक एक्सपोजर उस समयमा प्रचलित ब्याज दर मा निर्भर हुनेछ। यो निम्न हो, उधारकर्ताको लागि अझ राम्रो छ। यदि ऋणबाट बाँकी रहेको ऋण दस वर्षको अवधिमा भुक्तान गर्न सकिन्छ भने, दरहरू 4,0% को डेबिट ब्याजको साथ शुरुमा समान स्तरमा हुनेछ। वास्तवमा, बैंकको हालको ब्याज दर महत्वपूर्ण छ। धेरैले यसलाई यहाँ दिन्छन् र उनीहरुको बंधक बाँकीको लागि सबै भन्दा सस्तो बैंक भेट्टाउँछन्। कहिलेकाहीँ, सम्पूर्ण अवशिष्ट ऋण पुन: प्राप्ति गरेर निकै सस्तो हुन सक्छ, निरन्तर किस्तहरूको लागि नयाँ एन्युटी ऋण प्रदान गर्नुहोस् र गृह मालिकको लागि राम्रो गणना गरिनेछ।
अघिल्लो लेखकम्पनी ऋण
अर्को लेखजम्मा शुल्क